पत्याउनै गाह्रो Archives - E mechi
Apr252019 by emechiNo Comments
आधा उमेरको विद्यार्थीसँग सल्किएपछि शिक्षिकाले गरिन श्रीमानको हत्या, त्यसपछि…
Posted in पत्याउनै गाह्रो
काठमाडौ । एकजना महान विद्धानले भन्नु भएको छ कि, ‘माया र युद्धमा सब कुरा जायज हुन्छ ।’ मायाप्रेमको कुनै पनि सिमा हुदैन प्रेम जुन सुकै बेला जो संग पनि हुन् सक्छ ।प्रेमलाई न उमेर ले छेक्छ न जात धर्मले रोक्छ । आज हामीले कुरा गर्न गइरहेको प्रेम सम्बन्ध पनि यस्तै फरक प्रकारको रहेको छ । भारत हरियाणा राज्यको पानीपात जिल्लामा शिक्षिका र विद्यार्थीबीच अबैध सम्बन्ध रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । जानकारी अनुसार ३० वर्षीया अमिता नामकी शिक्षिकाले आफ्नै १९ वर्षीय अमित नामका विद्यार्थीसँग अबैध सम्बन्ध राख्दै आएको समाचार बाहिरिएको हो ।शिक्षिको आफ्नै विद्यार्थीसँग अबैध सम्बन्ध रहेको श्रीमानले जानकारी पाएका थिए । सोही कारण उनीहरुको दिनदिनै झगडा हुन थाल्यो । अन्तमा ती शिक्षिका आवेशमा आएर आफ्नो प्रेमी किशोर विद्यार्थीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या गरिदिइन् । प्रहरीले छानविन गर्ने क्रममा श्रीमा
थाइल्याण्डमा सुरु भयो योनी गोरो बनाउने नयाँ ट्रेन्ड..हेर्नुहोस पुरा
बैंकक । थाइल्याण्डका मानिसहरुलाई यतिबेला अनौठो रुचि जागेको छ । विशेष गरेर पुरुषहरु आफ्नो गुप्ताङ्ग गोरो बनाउन जुटेका छन् । बिबिसीमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार एसियाली राष्ट्रहरुमा गोरो बन्ने कोशिस नौलो भने होइन । किनभने यहाँ कालो रंगलाई लिएर अनौठो सोच रहेको छ । हालै गुप्ताङ्गलाई गोरो बनाउने बारे प्रक्रिया अनलाइनमा राखेपछि यो केही समयमा नै भाइरल बनेको थियो । यसमा मानिसहरुको क्रेज बढेपछि थाइल्याण्डको स्वास्थ्य मन्त्रालय चेतावनी समेत जारी गरेको छ । यस प्रक्रियामा सहभागी एक पुरुष भन्छन्, ‘म स्वीमिङ ब्रिफ्समा अझै कन्फिडेन्ड महसुस गर्न चाहन्छु ।’ ३० वर्षीय यी पुरुषले दुई महिनाअघि यस प्रक्रियाबाट गुज्रेका थिए । उनी भन्छन्, ‘फरक महसुस हुँदैछ ।’ के–का लागि यो ? यो ट्रिटमेन्ट गर्ने क्लिनकले आफ्नो फेसबुक पेजमा यो पोष्ट राखेपछि दुई दिनमा नै १९ हजार पटक सेयर भएको थियो । यस प्रक्रियामा छा
Posted in पत्याउनै गाह्रो, भिडियो
जेन्सी । घरको छतमा ठूल ठूला सरर गाडी गुडेको तपाईले कहिल्यै देख्नुभएको छ रु चीनको चोंगक्विङ सहर माथीको पाँचतले घरको माथी देखिएको सडकको तस्विर अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेको छ ।५ तले घरमाथि गाडी नै गुड्ने यो सडक विश्वमा नै भिन्न शैलीको भएको भन्दै संसारभर यसको चर्चा सुरु भएको छ । जुन हेर्दा निकै रोमाञ्चक र आर्कषक छ । उक्त सडकको तल्लो तलामा रहेका पसलहरु पनि आर्कषणको केन्द्रबिन्दु नै बनेको चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ । सिन्ह्वाका अनुसार यो सडक विश्वकै नमुना सडक मध्येको एक हो । जसलाई हेर्नेको घुँईचो नै लाग्छ हेर्नुहोस भिडियोमा र यो पनि पढ्नुहोस् यस्तो गगनचुम्बी भवन जसमा महिलाको स्तन प्रदर्शन गर्न राखिएको छ (तस्बिर सहित) एजेन्सी – स्तनलाई महिलाको गोप्य अंग भनिन्छ । तर त्यही एउटा महलमा भने प्रर्दशनीका लागि राखिएको छ । नेपाली समाजमा महिलाको स्तनलाई गोप्य
३० वर्षकी शिक्षिकाले १९ वर्षीय विद्यार्थीसँग लभ पारेपछि घट्यो नसोचेकै घटना
एजेन्सी । भनिन्छ प्रेम अन्धो हुन्छ ! यसको कुनै पनि दयारा हुदैन प्रेम जुन सुकै बेला जो संग पनि हुन् सक्छ । प्रेमलाई न उमेर ले छेक्छ न जातधर्मले रोक्छ । तपाई हामीले सुन्ने गरेका छौ विद्यार्थी शिक्षक-शिक्षिको अफेयरको बारे। त्यस्तै घटना भारतको हरियाणामा घटेको छ । हरियाणाको पानीपात जिल्लामा शिक्षिका र विद्यार्थीबीच अबैध सम्बन्ध रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । जानकारी अनुसार ३० वर्षीया अमिता नामकी शिक्षिकाले आफ्नै १९ वर्षीय अमित नामका विद्यार्थीसँग अबैध सम्बन्ध राख्दै आएकी समाचार बाहिरिएको हो । शिक्षिको आफ्नै विद्यार्थीसँग अबैध सम्बन्ध रहेको श्रीमानले जानकारी पाएका थिए । सोही कारण उनीहरुको दिनदिनै झगडा हुन थाल्यो । अन्तमा ती शिक्षिका आवेशमा आएर आफ्नो प्रेमी किशोर विद्यार्थीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या गरिदिइन् । प्रहरीले छानविन गर्ने क्रममा श्रीमानको शव घरभित्र फेला पारे । हात र खुट्टा ब
Apr242019 by emechiNo Comments
एजेन्सी–लिबियाका पुर्व शासक जनरल मुअम्मर गद्धाफीको अन्त भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, आज पनि उनको चर्चा हुने गरेको छ । गद्धाफीको शासनकाल क्रुरता र बर्बरताले भरिएपछि लिबियाली जनताका लागि गद्धाफीले गरेका कामहरु आजसम्म कुनै पनि शासकले गर्न सकेका छैनन् ।गद्धाफीसँग जोडिएका केही कुराहरु जसका बारेमा थोरै मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ । १. देशका हरेक नागरिकलाई सरकारले घर दिएको थियो प्रत्येक नागरिकलाई घर मानव अधिकारको पहिलो सुचीमा राखिएको थियो । गद्धाफीले कसम खाएका थिए जबसम्म लिबियाका हरेक नागरिकलाई घर हुनेछैन तबसम्म आफ्ना माता पितालाई घर बनाउने छैनन् । यसै कारण पनि गद्धाफी परिवार टेन्टमा बस्ने गर्थे । २. बिना व्याज बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था गरिएको थियो लिबियामा गद्धाफी सरकारको आफ्नै स्टेट बैंक रहेको थियो । यस बैक मार्फत आफ्ना नागरिकलाई बिना व्याजमा ऋण दिने गरिन्थ्यो । त्यस्तै तेल
Apr232019 by emechiNo Comments
सावधान ! अनुहारको रौ हटाएर राम्री बन्न पार्लर पुगेकी यी युवती भइन् यस्तो कुरुप, भयो आधा अनुहार जलेर कालो
काठमाडौ । प्राय सबै महिलाहरुमा सुन्दर भएर हिड्ने चाहना हुन्छ । त्यसका लागी महिलाहरु विभिन्न कस्मेट्रिक चिजहरुको प्रयोग गरेर वा व्युटी पार्लर धाएर भएपनि सुन्दर र आकर्षक बनेर हिड्दछन् । तर पार्लरमा ट्रिटमेन्टमा भएको सानो गल्तीले राम्रो हुन खोज्दा कुरुप भएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । आज हामी त्यस्तै एक पछिल्लो उदाहरण बनेकी अस्ट्रेलियाकी एक युवतीको बारेमा कुरा गदै छौ । उनको नाम लिलियन पल हो । उनले आफ्नो अनुहारको रौ हटाउन स्किन ट्रिटमेन्ट लिदाकोे डरलाग्दो अनुभव शेयर गरेकी छिन् । उनी एक दिन आफ्नो अनुहारमा रौ आएकाले लेजर ट्रिटमेन्ट मार्फत रौ सफा गर्नका लागी पार्लर पुगकी थिइन् । तर व्युटी पार्लरबाट निस्कदा उनी छालाको खराबीको कारण झन् कुरुप भइन् । किनभने पार्लरमा लिलियनको आधा अनुहार जलेर कालो भयो । त्यसपछि उनी अस्पताल गइन् । डाक्टरको अनुसार उनको यो भयानक घाउ निको हुन लामो समय लाग्ने भएकाले ज
यस्तो गगनचुम्बी भवन जसमा महिलाको स्तन प्रदर्शन गर्न राखिएको छ (तस्बिर सहित)
एजेन्सी – स्तनलाई महिलाको गोप्य अंग भनिन्छ । तर त्यही एउटा महलमा भने प्रर्दशनीका लागि राखिएको छ । नेपाली समाजमा महिलाको स्तनलाई गोप्य राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको भएपनि बेलायतमा भने सोही स्तनलाई एउटा गगनचुम्बी भवनमा राखेर प्रर्दन गरिएको छ । पश्चिमा देशहरुमा हामीलाई अश्लील लाग्ने गोप्य अंगका प्रदर्शनलाई सामान्य मानिन्छ । यही पश्चिमा संस्कृतिको नक्कल गर्न खोज्दा नेपालमा पनि यसको गम्भिर प्रभाव भने नपरेको होइन । यो बिचमा बेलायतको एक गगनचुम्बी भवनमा महिलाको स्तनलाई प्रदर्शनमा राखिएको छ । यो आफैंमा एक अनौठो दृश्य हो । यी तस्वीरहरु आमा दिवसको अवसरमा पदर्शन गरिएको थियो ।
प्रेमीसँग गराइदिए श्रीमतीको विवाह, उपहारमा दिए छोरा
एजेन्सी। भारतको बिहारस्थित एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीको विवाह अर्का व्यक्तिसँग गराइदिएका छन् । यतिमात्र होइन उनले आफ्ना साढे दुई वर्षका छोरा श्रीमतीलाई उपहारका रुपमा सुम्पिएका छन् । यो अचम्मको विवाहमा थुप्रैको उपस्थिती पनि थियो । घटना बिहारको सालेपुर गाउँको हो । जहाँ एक व्यक्ति आफ्नी श्रीमतीसहित भाडाको घरमा बस्थे । उनीहरुका साढे दुई वर्षका छोरा पनि थिए । तर एकदिन ती व्यक्तिलाई कुनै मामलामा पुलिसले पक्राउ गरेर जेलमा राखे । यसैबीच ती व्यक्तिकी श्रीमतीको सम्बन्ध घर मालिकका छोरा मोनूसँग रह्यो । कुरा यति बढ्यो कि यी दुई एक–अर्काबिना बस्नै सकेनन् । जब महिलाका श्रीमान जेलबाट छुटे तब उनलाई उनीहरुको सम्बन्धबारे थाहा भयो । त्यसकारण उनले यी दुईको विवाह गराइदिने बारे सोचे । उनले ग्राम पंचायत भवनमा सरपञ्च पवन कुमार साहसमेत थुप्रैको उपस्थितीमा दुईको विवाह गराइदिए । आफ्ना साढे दुई वर्षका छोरा प
विवाह गरेर मलेशिया गएकी थिइन्, बच्चाको रगत बुवासँग नमिलेपछि खुल्यो ठूलो रहस्य
सुतर, गुजरात। सुरतका डाक्टर विरुद्ध वडोदरामा बलात्कारको प्रयास गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराउने महिला विरुद्ध डाक्टरले ब्याकमेल गरेको भन्दै अर्को उजुरी दर्ता गराएका छन्। डाक्टरले महिला विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएपछि प्रहरीले महिलालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार अक्षरधाम सोसाइटी निवासी विपुल हिम्मत मिस्त्री डाक्टर हुन्। उनको सिंगणपोर चार रास्ता नजिकै स्क्वायर प्याइन्टमा बच्चाको अस्पताल छ। २००९ मा मेट्रिमोनियल साइटका माध्यमबाट विपुलको परिचय दीपाली (नाम परिवर्तन) सँग भयो। त्यसपछि उनीहरु साथी भए। २०१० मा दीपालीले अर्कै युवकसँग विवाह गरेर मलेसिया गइन्। उता २०११ मा बिपुलको किंजनसँग विवाह भयो। २०१४ मा दीपाली मुम्बई आएर यतै बस्न थालिन्। दीपालीले फेसबुकमार्फत फेरि विपुलसँग सम्पर्क बढाइन्। दीपालीसँग भेट गर्न विपुल मुम्बई गए। त्यसपछि फोनका कुरा हुन थाल्यो। यही क्रममा उनीहरुबीच कयौं पटक शार
Apr222019 by emechiNo Comments
केटी खोज्दा खोज्दा नपाएर हत्तु बनेका एक युवकले गरे रोबोटसँग विवाह
काठमाडौँ । विश्वमा निर्जिव वस्तुसँग पनि मानिस विवाह गर्ने गर्दछन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर,चीनका इन्जिनियरले एउटा रोबोटसँग विवाह गरेर यस्तै आश्चर्य लाग्ने काम गरेका छन् । केटी खोज्दा खोज्दा नपाएर हत्तु बनेका एक चिनियाँ इन्जिनियरले अन्ततः आफैंले बनाएको रोबोटसँग विवाह गरेका छन् । ३१ वर्षीय इञ्जिनियर झेङ जियाजियाले गत वर्षको अन्त्यतिर रोबोट बनाएका थिए । ‘यीङयीङ’ नाम राखिएको यो रोबोटले चिनियाँ अक्षर चिन्न, फोटो पहिचान गर्नका साथै केही अक्षर उच्चारण पनि गर्छ । झेङले यो रोबोटलाई हिँडडुल गर्न र घरायशी काम गर्न सक्ने गरी अपग्रेड गर्ने योजना बनाएका छन् । रातो स्कार्फ लगाएर दुलही झैं सजाई झेङले यीङयीङसँग पराम्परागत तरिकामा विवाह गरेका थिए । हुआवे कम्पनीका पूर्व कर्मचारी झेङ अहिले हाङझोउस्थित ड्रिम टाउनमा काम गर्छन् ।उनको यो बिवाह अनौठो लागे पनि विज्ञहरुले आगामी दिनमा रोबोट
जात्रै जात्राको युनिट पूर्वमा
May 23, 2019 May 24, 2019 by emechi
सामाजिक सन्जालमा तस्बिर भाइरल, के हो यथार्थ
May 17, 2019 by emechi
मेचीनगर गोल्डकप : त्रिभुवन आर्मी क्लब फाइनलमा
May 2, 2019 May 2, 2019 by emechi
लोकसभा चुनावका कारण स्वारा भास्करको हस्तमैथुनको दृश्य चर्चामा
May 2, 2019 by emechi
सिउँदो रंगाउन नपाउदै भीमको प्रेम खोस्यो दैवले
May 1, 2019 May 1, 2019 by emechi
गर्मी लागेपछि साथिहरुसँग यस्तो अवतारमा भेटिइन नायिका कार्की (तस्वीर सहित)
आफ्नो जन्मदिनमा बाल आश्रम पुगेर हात जोडेर के मागे संचारकर्मी घिमिरेले(भिडियो हेर्नुहोस)
कैचिवालिको हन्डर ठोकर अनि तनाबको वास्तविक काहाली लाग्दो कथा (भिडियो)
आक्रोशित विजय लामाले भने : देशको पक्षमा बोल्दा कारवाही गर्ने ? म डराउँदिन सत्य बोली नै रहन्छु [भिडियो हेर्नुहोस ]
दारी भाईको चिया पसल : चिया बेचेर मालामाल दारी भाईको दारी पाल्नुको रहस्य सुन्दा सब चकित [हेर्नुहोस् भिडियो ]
प्रदिप खड्का राम्रो हिरो अनमोल केसी राम्रो छोरो भन्ने सबी कार्की नायिका भन्दा राम्री हाँस्दा त झन लास्टै दामी [भिडियो हेर्नुहोस ]
: ०१ ५९००५६७
निर्देशक : धरणिधर पोख्रेल
सम्पादक /संचालक : प्रकाश पौडेल
सहसम्पादक : किशोर उपरकोटी
All Rights Reserved with Emechi.com | Theme Developed by NpCreation